काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका चार कार्यकारी निर्देशकहरु अवकाश हुने भएका छन्। कार्यकारी निर्देशकहरु लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, महेश्वरलाल श्रेष्ठ, सुनील उदास र सरिता भट्ट छिटै अवकाश हुन लागेका हुन् । निरौला मुद्रा ब्यवस्थापन विभाग र श्रेष्ठ संस्थागत योजना विभाग प्रमुख हुन्। दुवैले वाणिज्य बैंकको नेतृत्व पनि गरेका थिए। राष्ट्र...
राष्ट्रबैंकले पुस १ गतेबाट 'वैदेशिक रोजगार बचतपत्र' बिक्री खुला गर्ने, के–के छन् विशेषताहरु ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा रहेको र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्रीमा ल्याउने भएको छ । राष्ट्रबैंकले पुस १ गतेदेखि नेपाल सरकारको रु. २० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८१ को बिक्री खुलाउने भएको हो । यो बचतपत्रका लागि वार्षिक वार्षिक १० प्रतिशतकार दरले ब्याज पाइनेछ । ६/६ महिनामा...
राष्ट्रबैंकको नयाँ डलर सटही नीतिले विदेश घुम्न जाने नेपाली प्रभावित, विदेशी कामदार लाभान्वित
काठमाण्डौ । तपाइँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ । साथमा १५ सय डलर लिएर जान पाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । अब ढुक्क नहुनुहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्राभल एजेन्सीमार्फत विदेश घुम्न जान चाहनेहरुलाई आवश्यक डलर सटहीमा घुमाउरो पाराले कटौती गरेको छ । यसअघि विदेश घुम्न जाँदा ट्राभल एजेन्सीमा बुझाएको पैसा र विदेशमा होटेल बुक गर्दाको खर्चबाहेक साथमा १५ सय...
काठमाण्डौ । निजी आवास निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने आवास कर्जामा खुकुलो नीति बनाएको छ । बैंकद्वारा शुक्रबार जारी संशोधित एकीकृत निर्देशिक २०७६ ले निजी घर तथा आवास खरिदमा उपलब्ध हुने कर्जामा सहज नीति ल्याएको हो । संशोधित निर्देशिका अनुसार अब आवासीय प्रयोजनका...